फिल्डमा खटिएनन् पुनर्निर्माण इन्जिनियर - Himalayan Kangaroo
फिल्डमा खटिएनन् पुनर्निर्माण इन्जिनियर
Posted by Himalayan Kangaroo | ६ बैशाख २०७४, बुधबार ०२:०८ |
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सरकारले खटाएका प्राविधिक फिल्डमा जान अटेर गरेकाले भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरणमा समस्या परेको जनाएको छ । जसका कारण दोस्रो किस्ताबापतको अनुदान लिने पीडितको संख्या कम भएको उसको भनाइ छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २९ चैतसम्ममा पाँच लाख ४२ हजार नौ सय ६३ भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताबापतको अनुदान रकम लिएका छन् । तर, दोस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम लिनेको संख्या दुई हजार नौ सय १७ मात्रै छ । यो भनेको ०.५३ प्रतिशत मात्रै हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले कम इन्जिनियर फिल्डमा खटिएका कारण दोस्रो किस्ताबापतको रकम कम वितरण भएको बताए । ‘भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताबापतको रकम झन्डै २७ अर्ब रुपैयाँ लिएका छन् । त्यसको तुलनामा निक्कै कम मात्रै दोस्रो किस्ताबापतको रकम पीडितले लगेका छन् । यसको मुख्य कारण प्राविधिक फिल्डमा नगएरै हो । यो समस्या जिल्लामा म आफैँ अनुगमनमा गएको वेला भेटेको छु,’ उनले भने ।
कस्ता घरले पाउँछन् दोस्रो किस्ताबापतको अनुदान ?
प्राधिकरणले तयार परेको कार्य्विधिअनुसार भूकम्पपीडितले प्राविधिक कर्मचारीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा घर निर्माण गर्नुपर्छ । प्राविधिकको सुपरिवेक्षणभन्दा बाहिर गएर बनाइएको घरलाई अनुदान रकम दिने व्यवस्था छैन । फिल्डमा प्राविधिक नै नगएपछि भूकम्पपीडितले आफूखुसी घर बनाउँछन् । यसरी बनाइएका घर मापदण्डविपरीतका हुन्छन् । त्यस्ता घर अनुदान पाउन योग्य हुँदैनन् । दोस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम कम निकासा हुनुको मुख्य कारण यही भएको पोखरेलको भनाइ छ ।
‘भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ताबापत रकम दिन ११ अर्ब निकासा भइसकेको छ । त्यसमध्ये आठ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ जिल्लामै थन्किएको छ । पीडितले पाउन सकेका छैनन् । इन्जिनियर फिल्डमा नजाँदा भूकम्पपीडितको घर सुपरिवेक्षण भएन, मापदण्डविपरीतका घर बने । त्यसो हुँदा अनुदान रकम पाउन सकेनन्,’ उनले भने ।
साढे चार सय प्राविधिक पुगेन
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिन दुई हजार पाँच सय ६८ प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी खडा गरिएको छ, तर अहिले सरकारले दुई हजार एक सय २० जना प्राविधिक मात्रै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटाएको छ । चार सय ४८ प्राविधिक अझै पनि अपुग छ । अपुग प्राविधिक थप्नेतर्फ सरकारले पहल गरेको छैन ।
जिल्लामै बसेर तलबभत्ता बुझ्दै प्राविधिक कर्मचारी
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय कार्यान्वयन एकाइले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा प्राविधिक पठाउँछ । उसको तथ्यांकअनुसार अहिले फिल्डमा इन्जिनियर, सबइन्जिनियर र असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर गरी दुई हजार एक सय २० प्राविधिक खटिएका छन् । तर, उनीहरू सबै फिल्डमा नगई जिल्लामै बसेर तलबभत्ता बुझ्ने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । ‘केही ठाउँमा त प्राविधिकले राम्रै काम गरेका छन्, तर केहीमा भने समस्या छ । इन्जिनियर जिल्लामा बस्छन् । गाविससचिवसँग मिल्छन् । तलबभत्ता जिल्लामै बुझ्छन् । काम प्रभावकारी बन्न नसक्नुको प्रमुख कारण यही हो,’ सिइओ पोखरेलले भने ।
‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा इन्जिनियर खटाउने जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयको हो । तर, उसले त्यति धेरै इन्जिनियरलाई काबुमा राख्नै सक्दैन । जसले गर्दा काममा समस्या आइरहेको छ’, पोखरेलले भने ।
Previousस्कुल र स्टेसनरीको डरलाग्दो कनेक्सन
Next‘त्रिभुवन विमानस्थलमा समस्यै समस्या’
१८ माघ २०७३, मंगलवार ०२:००
पत्रकार थापाको हत्याका दुई आरोपितलाई छुट्कारा
२२ श्रावण २०७१, बिहीबार १०:३४
भारतले नेपालको राष्ट्रिय गान बीचमै रोकिदियो,तर नेपालीले गाउँन छोडेनन्
४ फाल्गुन २०७२, मंगलवार ०३:२६
भूमध्य सागरमा डुंगा पल्टिँदा कम्तिमा ६५ जनाको मृत्यु
२८ बैशाख २०७६, शनिबार ०१:४२